फिफा विश्वकप : १२ दिन बाँकी ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
फिफा विश्वकप : १२ दिन बाँकी !
Posted by Headline Nepal | १९ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०८:३५ |
१९ जेष्ठ, काठमाण्डौं । विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता फिफा विश्वकप १२ दिनपछि सुरु हुँदैछ । ब्राजिलमा आयोजित पछिल्लो संस्करणको उपाधि जितेसँगै जर्मनीले चार पटक विश्वकप उपाधि जितिसकेको छ । यसपटक जर्मनी ब्राजिलको इतिहास तोड्ने धुनमा हुनेछ । ब्राजिलले सर्वाधिक ५ पटक विश्वकप उपाधि जितिसकेको छ ।
ब्राजिल आफैं पनि यस प्रतियोगिताको प्रमुख दावेदारको रुपमा अगाडी आएको छ । स्टार फरवार्ड नेयमार चोटका कारण पूर्ण रुपमा फिट नभएपनि टोली निकै बलियो छ । ब्राजिलको मेडिकल टोलीले बारम्बार नेयमार स्वस्थ हुने पनि बताउँदै आएको छ । नेयमारको अनुपस्थितिमा पनि फिलिप कोउटिन्हो, ग्यब्रिएल् जेसस, डग्लस कोस्टा, रोबर्टो फिर्मिनो लगायतका खेलाडीको उपस्थितिले टोली निकै बलियो छ ।
मिडफिल्डमा पनि ब्राजिलको राम्रो पकड छ । डिफेन्समा विशेषत लेफ्ट ब्याक मार्सेलोको उपस्थितिले टोलीमा सन्तुलन प्रदान गरेको छ । राइट ब्याक ड्यानी आल्भेस चोटका कारण विश्वकपमा उपस्थित नहुँदा टोलीमा अनुभवको कमि हुने डर छ । तर मार्सेलोले डिफेन्सको जिम्मेवारी शिरोपर गरेर आल्भेसको कमि महसुस हुन दिने छैनन् । उनलाई थियागो सिल्भाले पनि साथ् दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्राजिल सम्मिलित समूह ‘ई’ मा स्विटजरल्यान्ड, कोस्टारिका र सर्बिया रहेका छन् । विश्वकप यात्रा सुरु गर्नुअघि दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा ब्राजिलले क्रोएसिया र अस्ट्रियासँग खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ । दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा नेयमारले सुरुआती रोजाइमा खेल्ने सम्भावना निकै कम छ । यद्यपी प्रशिक्षक टिटेले नेयमारको फिटनेस जाँच्न यी खेलको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
Previousइटालीमाथि फ्रान्सको शानदार जित, अस्ट्रेलियाले चेक गणतन्त्रलाई हरायो
Nextस्वास्थ्य उपचारपछि राष्ट्रकवि घिमिरे स्वदेश फर्कदै
डिजेल तस्करले गरे प्रहरीमाथि आक्रमण, ३ प्रहरी घाइते
३ पुष २०७५, मंगलवार ११:२४
संसदीय कोषमा १० करोड ७० लाख विनियोजन
११ बैशाख २०७५, मंगलवार १८:४२
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
१४ बैशाख २०७५, शुक्रबार १४:१०
सरकार प्रोपोगाण्डातिर नलागोस् : गगन थापा (अन्तवार्ता)
१० श्रावण २०७५, बिहीबार १४:१५